လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ သူ့တို့ ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ထိုးဖောက်မြင်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ….. – Cele Snap
လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ သူ့တို့ ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ထိုးဖောက်မြင်ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ…..
April 26, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ထင်ရှားတဲ့ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် ကောင်းမြတ်စံဟာဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားသလို ဇာတ်ကားတွေလည်းများစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။မင်းသားကောင်းမြတ်စံကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေကာ လို အပ်နေသူတွေအတွက်လည်း လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ကောင်းမြတ်စံကတော့ လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုဖောက်ထိုးမြင်နေရတယ်ဆိုပြီး အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်..။တကယ်လား ဟန်ဆောင်နေတာလားဆိုတာကို လူကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အတွင်းစိတ်ကိုမြင်နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကို ကောင်း မြတ် စံက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဖောက်ထိုးမြင်ရတယ်…တစ်ကယ်လား.. ဟန်ဆောင်နေတာလားဆိုတာ..ရုပ်အဆင်းအသွင်အပြင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်… အဲ့ဒါ ဘဝကသင်ပေးခဲ့တဲ့ အသိပညာ ✌🏻..” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြလာတဲ့ မင်းသားကောင်းမြတ်စံကို ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း အားပေးစကားတွေပြောရင်း ကျန်းမာ ရေးအပြင် အစစအရာရာဂရုစိုက်ကြဖို့ကိုလည်း ရေးသားပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်..။
Source : Kaung Myat San’s Fb Acc
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ထငျရှားတဲ့ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ ထူးထူးခွားခွားဆှဲဆောငျမှုရှိနတေဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော ကောငျးမွတျစံဟာဆိုရငျ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာရရှိထားသလို ဇာတျကားတှလေညျးမြားစှာ ရိုကျကူးထားပွီး ပရိသတျ တှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားသူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော..။မငျးသားကောငျးမွတျစံကတော့ လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနကော လို အပျနသေူတှအေတှကျလညျး လှူဒါနျးမှုတှနေဲ့ တတျနိုငျသလောကျ ဖေးမကူညီနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
ကောငျးမွတျစံကတော့ လူတဈယောကျကိုမွငျတာနဲ့ သူ့ရဲ့အတှငျးစိတျကိုဖောကျထိုးမွငျနရေတယျဆိုပွီး အသှငျအပွငျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ရငျဖှငျ့ပွောပွလာပါတယျ..။တကယျလား ဟနျဆောငျနတောလားဆိုတာကို လူကိုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ အတှငျးစိတျကိုမွငျနရေတဲ့ အတှအေ့ကွုံအသဈတှကေို ကောငျး မွတျ စံက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
“လူတဈယောကျကိုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ သူရဲ့ အတှငျးစိတျကို ဖောကျထိုးမွငျရတယျ…တဈကယျလား.. ဟနျဆောငျနတောလားဆိုတာ..ရုပျအဆငျးအသှငျအပွငျနဲ့ မဆိုငျဘူးနျော… အဲ့ဒါ ဘဝကသငျပေးခဲ့တဲ့ အသိပညာ ✌🏻..” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ..။အတှအေ့ကွုံတှကေို ပွောပွလာတဲ့ မငျးသားကောငျးမွတျစံကို ပရိသတျတှအေားလုံးကလညျး အားပေးစကားတှပွေောရငျး ကနျြးမာ ရေးအပွငျ အစစအရာရာဂရုစိုကျကွဖို့ကိုလညျး ရေးသားပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော..။
စည်းလုံးခြင်းနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ခိုင်မာပြီးသားမို့ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ကိုယ်တွေလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ဒေါင်း…..
ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့မွေးနေ့လေးကို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အေးသီတာ…..